“Waa inaan u dagaalanaa wax walba, waxaa na sugaya howlo adag oo horyaalka ah” – Klopp – Gool FM
(Liverpool) 23 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday in Manchester City ay tahay kooxda ugu fiican adduunka waqti xaadirkan.
Liverpool ayaa halkeeda ka sii waday inay dhibco hesho, lixdii kulan la soo dhaafay ay ka ciyaartay horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Liverpool ayaa xalay guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League.
Haddaba tababare Jurgen Klopp ayaa kulankii adkaa ay la qaateen kooxda Chelsea wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Ma xiiseenayo inaan noqdo sida Manchester City, laakiin waa inaan ku guuleysto Premier League 30 sano kaddib”.
“Laakiin Manchester City waa kooxda ugu xoogan adduunka, waxay u aheyd maalin qiiro badan kulankii Watford, haddii aad awoodo inaad arrintaas ku sameyso koox kasta ee adduunka ah, waxaad tahay Manchester City”.
“Waxaan la kulannay xaaladaas oo kale, kaddib markii ay guuldaro 5-0 ah naga soo gaartay garoonka Etihad sannadkii 2017, waxaan heystay 10 ciyaartoy, ma doonayo inaan cadaadis saaro Pep Guardiola laakiin waa kuwo fiican, balse anaguna xumaan ma lihin”.
“Ma ahan inaan maalin kasta la yaabanaado heerka kooxdeyda oo aan dhaho ‘Oh waa maxay dabeecaddani?, waa inaan u dagaalanaa wax walba, waxaa na sugaya howlo adag oo horyaalka ah”.